DAAWO: Xaggee u socotaa Somaliland 28 sanno oo ay gooni goosad ka tahay Soomaaliyada kale ka dib? – Puntlandtimes
HARGEYSA(P-TIMES) – Somaliland waxay mudo dheer sheegaysaa in ay ka baxday Soomaaliya, laakiin 28 sanno ka dib waxba iskama bedelin xaaladdaha gudaha ee Somaliland, mana jirto wax horumar ah oo laga sameyeye dhanka Aqoonsi in ay hesho, waxaana adag in ay xiligan ka baxdo Soomaaliya.
28 Sanno ka dib, Somaliland xubno badan oo horey u aaminsanaa in gooni-goosadku yahay xalka kaliya ee furan ayaa u diga-roganaya Soomaaliya in lala midoobo, dunida oo dhan ayay isku dayeen siyaasiinta Soomaliland in ay fikradahooda ka dhaadhiciyaan balse ilaa hadda waxba kama socon qorshahaas.
Ward Marqaan sxb saaka hawshaadu Marqaan waa dhaaftay dee??? Sxb ictiraafkii iminka Dayaxa ayaa lagu sheegay. MD Muse Bixi ayaana iminka Dayaxa ka soo dulqaadaya, inta aanu fogaan oo aanu Qoraxda aadin. ….😢😢😢😢
Hargaysa iyo burco xagee usocdaan waa sax wariyaha. Waxay ahayd inuu isticmalo xagee idoor usocdaan ileen. Degaan iyo shacab aysan lahayn bay khasbaya an. Iyi been citiraafka lagu radinayaan. Deganada harti puntland. Wariyaha ma oga miyaa on sanaag warsangali katageen jegaanta. Oo noqdeen puntland. Markay arkeen xu maanta oyo beenta hargaysa taala. Ee citiraafka lagu radiyo in laxasuuqo reer soil oo.been loo sheego caalmka saxaafada lo diiday shacabka somali wayn raba qorteen koox yar oo arimo hooda fulaya.qaarna xidha sida dhakool. Maaweelo yaan dhulbahante. Ka jaraan haritga.
Caqligoodu waa Go’ ama Koonfur iyo Waqooyi wax halagu qeybsado.Lol. Daarood tiro iyo dhul haystana iska ilaawa,Lol,. Soomaalileentu waa umad xagjir ah, labo qodob oo kala daran dad lasoo shir tagaya #Marqaanland. Somaliland waa cadowga Soomaaliyeed waana kansar u baahan in la gooyo.
war ka daa meesha ilaa faysal hangool loo dhiibo dhinac u dhicimayso maalin walba wuxuu ku hayaa garoowe iyo Ayaan tegeeynaa wuxuu moodaa fucking st in loo socdo